Ogaden News Agency (ONA) – Golaha Amniga ee QM oo Isku Raacay Go’aan Cambaareynaya Xadgudubka Saxafiga
Golaha Amniga ee QM oo Isku Raacay Go’aan Cambaareynaya Xadgudubka Saxafiga
Posted by ONA Admin	/ May 28, 2015
Shalay 27kii May 2015 ayuu go’aan isku raacay Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay cambaareynaya dhamaan xadgudubka loo gaysto saxafiyiinta, wuxuu sidoo kale cambaareeyay go’aanka QM sida aan sharciga ay uga baxsanayaan kuwaa dhibaatada u gaysanaya saxafiyiinta.
Go’aankan oo si-wadajir ah ay ku ogolaadeen 15ka xubnood ee ku jira Golaha Amniga ayaa ku adkaystay in saxaafad madaxbanaan oo dhex-dhexaad ah ay tahay udub dhexaadka dimoqraadiyada, iyo inay tahay saxaafadda xorta ah ay qayb ka tahay badbaadinta shucuubta.
Wuxuu go’aankan ka codsanayaa goobaha ay dagaalada ka socdaan in qaybaha isku haya ay badbaadiyaan saxaafadda oo aanay wax dhib ah u gaysanin, isla markana lasii daayo saxafiyiinta u xidhan dadlalka ama la afduubay ee loo haysto cudhaadh ahaanta.
Shirka Golaha Amniga ee lagu ogolaaday go’aankan ayaa si weyn looga soo qayb galay, dhamaan ergadii ka hadashayna waxay muujiyeen ahmiyadda ay leedahay saxaafadda iyo dhibaatooyinka kasoo gaadhaya saxafiyiinta raadinta xaqiiqada.
Waxaan la soconaa dhibkii loo gaystay labadii saxafi ee u dhashay dalka Sweden ee doonayay inay soo baadhaan doorka ay ku leedahay xasuuqa loo gaysanayo dadka shacabka ah ee Ogadenya shirkad shidaalka baadha oo laga leeyahay dalka Sweden. Labadaa saxafi ayaa loo maleegay shirqool ah inay la socdeen ciidan ONLF ah oo dagaal lagu qabtay, isla markaana ay ka qirteen maxkamadda horteeda inay galeen dambigaa. Shirqoolka loo maleegay saxafiyiintaa iyo markhati beenaadkii la horkeenay maxkamad ku sheegtii xukuntay labada saxafi ayaa waxaa caalamka soo gaadhsiiyay mudane Cabdulaahi Xuseen. Arintaa siday u dhacday ayaa laga diyaariyay filim documentary ah oo qaatay abaalmarino caalami ah.
Itoobiya ayaa ka mid ah dalalka ugu liita caalamka xagga nabadgalyada saxaafadda, waana dalka koobaad ee ku xukuma inay yihiin ama taageereen argagxiso saxafigii wax ka qora ururada ay ka midka yihiin ONLF, OLF, G7.